🥇 ▷ Shaybaarada kamaradaha Meizu 16Xs waxay muujinayaan lens xagal ballaadhan oo aad u sarreeya ✅
Shaybaarada kamaradaha Meizu 16Xs waxay muujinayaan lens xagal ballaadhan oo aad u sarreeya
Marka la siidaayo taxanaha Redmi K20, soosaarka soo socda ee la filayo wuxuu noqon doonaa Meizu 16X. Meizu wuxuu ku dhawaaqayaa taleefanka Khamiista, Mey 30. Waxaa la soo sheegay in aaladda ay ku qalabeysan tahay kamarad muuqaal saddex-gadaal ah, oo ka mid ah kamarad-xagal ballaaran. Muunado kamarado ah oo muujinaya muraayaddan shaqeynaya ayaa lagu soo daabacay internetka.
Muunad heerka sawirka ah Meizu 16Xs
Sawirro ayaa lagu dhejiyay Weibo injineerka Meizu isla markaana muujinaya sawir caadi ah iyo sawir ku yaal gees gees weyn oo isla hal meel ah. Meizu 16Xs waxay noqon doontaa taleefanka kumbuyuutarka ugu horreeya ee soo saaraha.
Sawir-xagal ballaadhan-ballaadhan ayaa lagu amaanayaa maqnaanshaha gebi ahaanba dhammaystirka dhalanrog ee foosto. Dhaliilaha-Barrel-qaabeeyaa waa dhaxalka lafdhabarta muraayadaha balaaran, waxa ay sameyneysaana waxay u leexisaa xariiq toosan gudaha. Tani waxay dhacdaa marka muuqaalka aragtida lensku ka ballaaran yahay cabbirka dareemaha. Kaameeradu waxay iskudayaysaa inay magdhowdo tan iyadoo laabinaayo xariiq toosan si ay u habboonato. Saameyntu sida caadiga ah waa la saxaa iyadoo la adeegsanayo software-ka-shaqeynta kadib, waxayna umuuqataa in Meizu 16X ay qabato shaqo aad u wanaagsan tan.
Meizu 16Xs muunad kamarad xagal ballaadhan ah
Meizu 16X wuxuu la imaan doonaa shaashadda 6.2-inji AMOLED oo leh scanner faraha ah. Waxaa lagu qalabeysan doonaa processor octa-core ah oo leh saacad isku celcelis ah oo ah 2.0 GHz oo ay weheliso 6 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo xusuusta ah. Waxay yeelan doontaa kamarad 16-megapixel selfie ah iyo 48-megapixel + 5-megapixel + 8-megapixel Camera. Meizu wuxuu ku dari doonaa batteriga 3900 mAh wuxuuna taleefanka kuugu dirayaa Android Pie horay loo sii rakibay.
Miyaad haysataa taleefanka Meizu oo aad ku nooshahay Shiinaha? XIGASHO: Ma haysataa taleefanka Meizu oo aad ku nooshahay Shiinaha? Meizu wuxuu kuu hayaa barnaamijka ballaarinta kaydinta